Umvelisi kunye nomthengisi wase China iQuartz EMontary
phezulu marble ngumntu ilize
I-quartz engenanto ephezulu
nano iglasi ilize phezulu
phezulu marble yendalo phezulu
Ilitye elinamatye elingaphezulu liphezulu
Itafile yekhitshi ye-quartz
i-nano yeglasi ekhompyutheni yekhitshi
Itafile yekhitshi yendalo yekhitshi
Itafile zamatye ngaphezulu
indawo yokugcina izinto usa
INDAWO YOKUGCINA E-USA
NANO IGLASI ilitye
1.Isicelo: Ikhitshi lendlu, irestyu, ihotele, Ivenkile yokuthenga, iziko lezoRhwebo, iProjekthi, ubunjineli, njl.
2.Factory: Thina umgca imveliso phambili kakhulu kunye nabenzi abanamava kakhulu; Singafezekisa iimfuno zakho zobungakanani obukhethekileyo kwimakhishithi kunye neemfuno ezizodwa zoyilo kwiimveliso ezigqityiweyo ngomatshini we-CNC wokukrola.
Umda: Wotho Double, Wotho Top Single, Bull Impumlo Double, Bull Impumlo Isiqingatha, Bull Impumlo Single, Double njl
Umgangatho: Nikezela ngetekhnoloji yanamhlanje ephucukileyo, inokumelana nobushushu, ibala, ibacteria kunye nefuthe
Isiqinisekiso: Iminyaka eli-10 iwaranti ebekiweyo
Isampuli: Singabonelela ngovavanyo olusemgangathweni
Isiqinisekiso: Ingxelo ye-CE / SGS / yovavanyo
Inkonzo: Ngaba kubonelela lokuhlambela lokuhlambela, uhlambe isitya, imingxuma cut
Izinto eziphathekayo Quartz
Ukutyeba 18 mm / 20mm / 30mm
Izicelo Phezulu kweLize, phezulu kweCounter Counter, kwiTafile ephezulu nakwifenitshala, njl
Igqitywe tu Ikhazimlisiwe
Inkqubo yobuGcisa Senza iincopho zamatye nge-quartz, sinqunqwe ngomatshini emva koko sakhazimla ngabasebenzi bethu abanamava nabanobuchule.
Ukusetyenziswa kunye nokusetyenziswa Igumbi lokutyela, igumbi lokuhlala, ihotele, indlu yokuhlala, ukusetyenziswa ekhaya
Iphakheji Ibhokisi yomthi epakisha amagwebu
Indlela yokuhlawula T / T, L / C.
Ixesha lokuzisa Ngeentsuku ezili-15 emva kokuba umyalelo uqinisekise
Ukhetho lwe-Edge Ukuphungulwa, isiqingatha senkunzi yenkomo, impumlo yenkomo epheleleyo, i-beveled, i-1/4 ngeenxa zonke, i-laminated beveled, i-laminated 1/4, i-round round, njl.
Iinkcukacha zomzi mveliso:
Amava: Ngamava eminyaka kwimveliso, iMontary inobungcali kunye nobuchule bokuyila amatye okwenziwa kunye namatye endalo. Uninzi lwabasebenzi bethu lunamava eminyaka-6 kubuqhetseba, bayasebenza kwaye bayakhula eMontary, kwaye bakulungele ukunikela ubulumko babo kunye namava kubo bonke abathengi ngokwenza i-countertop efanelekileyo. Umgangatho: IMontary iyayiqonda nzulu into yokuba umgangatho sisiseko sophuhliso lwexesha elide. Yiyo loo nto sinyanzelisa ukuhlolwa amaxesha ama-4, iqhekeza ngamaqhekeza, qinisekisa ukuba impazamo incitshiswe ubuncinci. Ixesha: Ekuhanjisweni kwexesha, iintsuku ezingama-20 zokusebenza kwisitya esinye se-20ft. Inkonzo: Siyayazi into oyifunayo kwaye siyakwazi ukukukhonza kakuhle. -Sineentengiso ezingama-30 ezenza inkonzo ye-VIP ngendlela ephucukileyo- Uluhlu lwamawaka emveliso, umbala, isimbo, ezilungele abathengi ukuthengwa okukodwa- Ingenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi kwiimveliso ezahlukeneyo -Amasebe ezinto ezikhethekileyo, ubungcali imisebenzi yokuhambisa, sinokubonelela ngezona zithuthi zintlef
Ukuhamba kwemveliso yeComputer ephezulu:
Inyathelo 1 Ukucanda (I-infrared Bridge Cutting Machine)
Inyathelo 2 Ukucinywa (Umatshini wokusika iJet yaManzi)
Inyathelo 3 Ukusika iidigri ezingama-45 (umatshini wokusika iidigri ezingama-45)
Inyathelo 4 Wokucoca (wokucoca Manual)
Inyathelo 5 I-Chamfer (i-Manual Beveling)
Inyathelo 6 Ukucoceka nokuHlola (ukuJongwa kweManyuwali)
Inyathelo 7 Ukupakisha (ngamaplanga crated)
1. Wenza ntoni uMontary? IMontary ingumenzi oqeqeshiweyo nonamava kunye nomvelisi wamatye / amatye endalo kunye neentloko eziphezulu, ngaphezulu kweminyaka eli-10 yokuthumela kwelinye ilizwe kwintengiso yehlabathi. 2. Kutheni kufuneka abathengi bakhethe iMontary?
Amanqaku omeleleyo eMontary:
1) Uluhlu olubanzi lokuqokelelwa kwemibala.
2) Soloko unamathela kufutshane kumkhwa wamazwe aphesheya.
3) Gxila ngakumbi kwingqokelela emhlophe-esekwe ngwevu kunye nokuqhekeza / ukuqokelelwa kwemithambo.
I-4) Umgangatho osemgangathweni wamazwe kunye nenkonzo, ngamaxabiso afikelelekayo amaTshayina.
5) 7 + 24 unxibelelwano olulula kunye nokuphendula ngokukhawuleza.
6) Zombini ii-slabs zamatye kunye neentloko ezigqityiweyo zifumaneka eMontary.
3. Ngawaphi amazwe awona marike aphambili eMontary? Amatye aseMontary kunye namanqwanqwa aqingqiweyo athunyelwa ikakhulu e-USA, Australia, Canada, UK, Italy, Mexico, Dubai, Turkey, Brazil, South Africa, HongKong, Korea, Vietnam, Thailand, Thailand, Malaysia, njl.
4. Ingaba iMontary ikhe yathatha inxaxheba nakowuphi umboniso? Qho ngonyaka iMontary ithatha inxaxheba kwimiboniso e-USA, eYurophu, eDubai, eBrazil, eAsia, njalo njalo.
5. Ngaba iMontary inesakhono sokwenza iincopho zamatye ezikhethiweyo zeeprojekthi? Ewe, iMontary inayo indibano yokusebenzela enalo lonke uhlobo lwezixhobo ezizenzekelayo zeetheyibhile esele zenziwe ukulungiselela iiprojekthi eziphezulu.
6. Loluphi ulwazi abathengi ekufuneka belinikeze iMontary ngokwenza iincopho eziphambili? Abathengi kufuneka babonelele ngemizobo yevenkile okanye umzobo obhalwe ngesandla eneenkcukacha zobukhulu kunye neprofayili esecaleni kunye nobungakanani obuchanekileyo.
7. Zeziphi iiprofayili ezisecaleni ezikhoyo eMontary? IMontary iyakwazi ukwenza zonke iintlobo zeeprofayili ezisecaleni, ezinjenge-Eased Polished, Half Bullnose, Full Bullnose, Bevel Edge, Radius Edge, Flat Laminated, Bevel Laminated, Radius Laminated, njl.
8 Ingaba iMontary ipakisha njani iincopho zamatye ezikhethiweyo? IMontary ipakisha iincopho esele zenziwe ngebhokisi eqinileyo yomthi kunye ne-foam ngaphakathi kwikreyithi yokukhusela.
9. Ngaba kunokwenzeka ukujonga iicargos kumzi-mveliso waseMontary ngaphambi kokulayisha? Ewe, bonke abathengi bamkelekile ngokufudumeleyo ukuba bahlole imithwalo ngaphambi kokulayisha.
10. Ngaba kunokwenzeka ukwenza i-OEM ngeMontary? Ewe iMontary ibonelela ngenkonzo ye-OEM ngokushicilela iiLogo zabaThengi okanye igama lenkampani.
Egqithileyo NANO IGLASI ilitye
Okulandelayo: UBOMBOLO BOBUGCISA
Ilitye leQuartz elingelolokwenziwa
ICalcutta Quartz Stone
I-Quartz Stone Counter ephezulu
Zwi Stone imiphezulu yeetafile
Quartz Stone ekubhalwe
Ilitye elimhlophe leQuartz